PICS: Zimbabwe prepares to swear in new leader, but where is Mugabe? | IOL News
Africa / 23 November 2017, 5:04pm / FARAI MUTSAKA and CHRISTOPHER TORCHIA
Zimbabwe's president-in-waiting Emmerson Mnangagwa greets supporters gathered outside the Zanu-PF party headquarters in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
A Zimbabwean soldier stands to attention during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
Zimbabwe is making preparations to swear in a new leader after 37 years. Picture: Ben Curtis/AP
Zimbabwean military parade during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
Members of the Zimbabwean military leave the pitch after a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
Zimbabwean military parade during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
Zimbabwean military parade during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa. Picture: Ben Curtis/AP
A Zimbabwean military band parades during a dress rehearsal ahead of Friday's presidential inauguration of Emmerson Mnangagwa, at the National Sports Stadium in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
A young supporter of Zimbabwe's president-in-waiting Emmerson Mnangagwa adjusts his beret as he awaits his arrival at the Zanu-PF party headquarters in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
A supporter of Zimbabwe's President in waiting Emmerson Mnangagwa, known as "The Crocodile", raise a stuffed crocodile in the air as they await his arrival at the Zanu-PF party headquarters in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
Harare, Zimbabwe - As Zimbabwe on Thursday prepared to swear in a new leader, Emmerson Mnangagwa, after 37 years, attention turned to the fate of Robert Mugabe and the wife who just days ago was poised to succeed him.
Zimbabwe's new rulers must show resolve for democracy: Britain
The opposition party MDC-T, which supported Mugabe's removal, said it was closely watching Mnangagwa's next moves, "particularly regarding the dismantling of all the oppressive pillars of repression."
Mnangagwa is a former justice and defense minister with close ties to the military who served for decades as Mugabe's enforcer, a role that earned him the nickname "Crocodile." Many opposition supporters believe he was instrumental in the army killings of thousands of people when Mugabe moved against a political rival in the 1980s, and he remains on a U.S. sanctions list over allegations of violently cracking down on opponents.
Mnangagwa, who fled Zimbabwe after being fired on Nov. 6, was in hiding during the week-long political drama that led to Mugabe's resignation. His appearance on Wednesday, flanked by heavy security, delighted supporters who hope he can guide Zimbabwe out of political and economic turmoil that has exacted a heavy toll on the southern African nation of 16 million.